UYesu Utyhila “Ubulumko Obuvela KuThixo” | Sondela
UYesu Utyhila “Ubulumko Obuvela KuThixo”
1-3. Abamelwane bakaYesu bangaphambili basabela njani kwimfundiso yakhe, yaye yintoni abangazange bayiqonde ngaye?
ABAPHULAPHULI babekhwankqisiwe. Umfana onguYesu wayemi phambi kwabo endlwini yesikhungu ebafundisa. Babemqhelile—wayekhulele esixekweni sabo, yaye wasebenza iminyaka emininzi phakathi kwabo njengomchweli. Mhlawumbi abanye babo babehlala kwizindlu uYesu awayencedise ukuzakha, okanye mhlawumbi babelima ngamakhuba nangeedyokhwe awayezenze ngezandla zakhe. * Kodwa babeza kusabela njani kwimfundiso yalo mntu wayesakuba ngumchweli?
2 Inkoliso yabo babemphulaphule yakhwankqiswa, yaza yabuza isithi: “Lo mntu ubufumene phi na obu bulumko?” Kwakhona bongezelela bathi: “Lo ngumchweli unyana kaMariya.” (Mateyu 13:54-58; Marko 6:1-3) Ngelishwa, aba bamelwane bakaYesu baqiqa ngelithi, ‘Lo mchweli ngumntu nje wasekuhlaleni njengathi.’ Phezu kwawo nje amazwi akhe obulumko, bamgatya. Babengazi ukuba ubulumko bakhe babungaveli kuye.
3 UYesu wabufumana phi obu bulumko? Wathi: “Oko ndikufundisayo asikokwam, kodwa kokwalowo wandithumayo.” (Yohane 7:16) Umpostile uPawulos wachaza ukuba uYesu “kuthi uye waba bubulumko obuvela kuThixo.” (1 Korinte 1:30) Ubulumko bukaYehova bubonakaliswa ngoNyana wakhe, uYesu. Eneneni, ngangendlela okwakuyinyaniso ngayo oku uYesu wada wathi: “Mna noBawo sibanye.” (Yohane 10:30) Makhe sihlolisise iinkalo ezintathu uYesu awabonakalisa ngazo “ubulumko obuvela kuThixo.”
4. (a) Wawusithini umxholo wesigidimi sikaYesu, yaye kutheni oko kwakubaluleke kakhulu? (b) Kutheni amacebiso kaYesu ayesoloko eluncedo yaye ebazuzisa abo baphulaphuleyo?
4 Okokuqala, khawucinge nje ngoko uYesu wakufundisayo. Umxholo wesigidimi sakhe wawusithi “iindaba ezilungileyo zobukumkani.” (Luka 4:43) Kwakubaluleke kakhulu oko ngenxa yendima eyayiza kufezwa buBukumkani ekuthetheleleni ulongamo lukaYehova nasekuziseni iintsikelelo ezihlala zihleli eluntwini. Kwakhona, kwimfundiso yakhe uYesu wanikela amacebiso obulumko ngobomi bemihla ngemihla. Wazingqina ‘enguMcebisi Omangalisayo’ owaxelwa kwangaphambili. (Isaya 9:6) Eneneni, ayenokuthini ukungamangalisi amacebiso akhe? Wayenolwazi olugqithiseleyo ngeLizwi likaThixo nangokuthanda kwakhe, eyiqonda ngokupheleleyo indlela ababunjwe ngayo abantu, yaye ebathanda ngokunzulu abantu. Ngoko ke, amacebiso akhe ayesoloko eluncedo yaye ebazuzisa abo baphulaphuleyo. UYesu wayethetha “amazwi obomi obungunaphakade.” Eneneni, xa amacebiso akhe esetyenziswa, akhokelela kusindiso.—Yohane 6:68.
5. Yiyiphi eminye yemibandela awayigubungelayo uYesu kwiNtshumayelo yaseNtabeni?
5 INtshumayelo yaseNtabeni ingumzekelo obalaseleyo wobulumko obugqithiseleyo obufumaneka kwiimfundiso zikaYesu. Le ntshumayelo, njengoko ibhalwe kuMateyu 5:3–7:27, isenokuba yanikelwa ngemizuzu engama-20 kuphela. Kodwa amacebiso akuyo akaphelelwa lixesha—asabalulekile nanamhlanje kanye njengoko ayenjalo ekuqaleni. UYesu wagubungela imibandela eyahlukahlukeneyo, kuquka indlela yokwakha ulwalamano oluhle nabanye (5:23-26, 38-42; 7:1-5, 12), indlela yokulondoloza ukucoceka kokuziphatha (5:27-32), nendlela yokuphila ubomi obunenjongo (6:19-24; 7:24-27). Kodwa uYesu wenza okungaphezu kokubaxelela nje kuphela ngekhondo lobulumko abo babephulaphule; wababonisa ngokubacacisela, ngokuqiqa nabo, nangokubanika ubungqina.
6-8. (a) Ziziphi izizathu ezinamandla zokuphepha ukuxhalaba azinikelayo uYesu? (b) Yintoni ebonisa ukuba amacebiso kaYesu abonakalisa ubulumko baphezulu?
6 Ngokomzekelo, khawucinge nje ngecebiso lobulumko likaYesu lendlela yokujamelana nokuxhalabela izinto eziphathekayo, njengoko lichazwe kuMateyu isahluko 6. UYesu wacebisa wathi: “Musani ukuxhalela imiphefumlo yenu mayela noko niya kukudla okanye niya kukusela, okanye imizimba yenu mayela noko niya kukunxiba.” (Indinyana 25) Ukutya nempahla zizinto eziyimfuneko, yaye kukokwemvelo ukuzixhalabisa ngendlela yokuzifumana. Kodwa uYesu usixelela ukuba ‘singazixhalabisi’ ngezi zinto. * Ngoba?
7 Khawuphulaphule njengoko uYesu eqiqa nabantu. Ekubeni uYehova esinike ubomi nomzimba, ngaba angoyiswa kukusinika ukutya kokuxhasa obo bomi nempahla yokwambathisa loo mzimba? (Indinyana 25) Ukuba uThixo unika iintaka ukutya aze ambathise iintyatyambo ngobuhle, hayi indlela aya kubanyamekela ngakumbi ngayo abakhonzi bakhe abangabantu! (Indinyana 26, 28-30) Ngokwenene, asikho isizathu sokuxhalaba. Akunakubandisa ubomi bethu nakancinane nje. * (Indinyana 27) Sinokukuphepha njani ukuxhalaba? UYesu usicebisa esithi: Qhubekani nikubeka kuqala ebomini benu ukunqula uThixo. Abo benjenjalo banokuqiniseka ukuba zonke iintswelo zabo zemihla ngemihla “ziya kongezelelwa” kubo nguYise osemazulwini. (Indinyana 33) Okokugqibela, uYesu unikela elona cebiso liluncedo—thabatha usuku lube lunye ngexesha. Kutheni usongeza amaxhala engomso kulawo anamhlanje? (Indinyana 34) Ngaphezu koko, kutheni uzixhalabisa ngokungeyomfuneko ngezinto ezisenokungaze zenzeke? Ukusebenzisa elo cebiso lobulumko kunokusisindisa kwintlungu eninzi kweli hlabathi lizaliswe ziingcinezelo.
8 Ngokucacileyo, amacebiso kaYesu aluncedo namhlanje njengokuba ayenjalo ukuwanikela kwakhe malunga nama-2 000 eminyaka eyadlulayo. Ngaba oko akubobungqina bobulumko baphezulu? Kwanelona cebiso lobulumko lomcebisi ongumntu lidla ngokuphelelwa lixesha kuze kufuneke ukuba lihlaziywe okanye litshintshwe. Noko ke, zona iimfundiso zikaYesu ziye zamelana nokutshintsha kwamaxesha. Kodwa akufanele kusimangalise oko, kuba lo Mcebisi uMangalisayo wayethetha “amazwi kaThixo.”—Yohane 3:34.
Indlela Awayefundisa Ngayo
9. Athini amanye amajoni ngemfundiso kaYesu, yaye kutheni oko yayingekokuzibaxa izinto?
9 Inkalo yesibini uYesu abonakalisa ngayo ubulumko bukaThixo yayiyindlela awayefundisa ngayo. Ngesinye isihlandlo, amajoni athile awayethunywe ukuba aye kumbamba abuya ephaca, esithi: “Akuzange kubekho omnye umntu othetha njengalo.” (Yohane 7:45, 46) Oku yayingekokubaxwa kwezinto. Kubo bonke abantu abakha baphila, uYesu, ‘owayevela kummandla ongaphezulu,’ wayenowona vimba mkhulu wolwazi namava awayenokuthaphula kuwo. (Yohane 8:23) Enyanisweni wafundisa ngendlela ekungekho mntu wakha wafundisa ngayo. Khawuqwalasele ezimbini nje kuphela zeendlela awayefundisa ngazo lo Mfundisi usisilumko.
“Zathi khamnqa izihlwele yindlela yakhe yokufundisa”
10, 11. (a) Kutheni imangalisa nje indlela uYesu awayisebenzisa ngayo imizekeliso? (b) Yiyiphi imizekelo ebonisa isizathu sokuba ukufundisa kukaYesu ngamabali kube nempumelelo?
10 Ukusebenzisa imizekeliso ngokuphumelelayo. Sixelelwa ukuba “uYesu [wathetha] ngemizekeliso kwizihlwele. Eneneni, wayengathethi kubo ngaphandle kwangomzekeliso.” (Mateyu 13:34) Ngokwenene buyamangalisa ubuchule bakhe obungenakulinganiswa nanto bokufundisa iinyaniso ezibalaseleyo ngokusebenzisa izinto zobomi bemihla ngemihla. Abalimi abatyala iimbewu, abafazi abalungiselela ukubhaka isonka, abantwana abadlala kwindawo yembutho, abalobi abarhola iminatha, abalusi abakhangela izimvu ezilahlekileyo—ezi zizinto abo babemphulaphule ababezibone kangangezihlandlo ezininzi. Xa inyaniso ebalulekileyo inxulunyaniswa nezinto eziqhelekileyo, loo nyaniso ibetheleleka msinya nangokunzulu engqondweni nasentliziyweni.—Mateyu 11:16-19; 13:3-8, 33, 47-50; 18:12-14.
11 Ngokufuthi uYesu wayesebenzisa amabali amafutshane awayefundisa ngawo indlela yokuziphatha okanye inyaniso yokomoya. Ekubeni kulula ukuwaqonda nokuwakhumbula amabali kuneengcamango ezingaqondwayo, amabali amafutshane ayesenza kube lula ukuziqonda iimfundiso zikaYesu. Kumabali amaninzi, uYesu wayemchaza uYise ngemizekeliso ecacileyo ekungelula ukuyilibala. Ngokomzekelo, ngubani ongenakuyiqonda ingongoma yebali lonyana wolahleko—yokuba xa ubani obephambukile eguquka ngokwenene, uYehova uya kuba nemfesane aze amamkele ngobubele?—Luka 15:11-32.
12. (a) UYesu wayisebenzisa njani imibuzo ekufundiseni kwakhe? (b) UYesu wabavala njani umlomo abo babethandabuza igunya lakhe?
12 Ukusebenzisa imibuzo ngobuchule. UYesu wasebenzisa imibuzo ukuze abenze abo baphulaphuleyo bazenzele ezabo izigqibo, okanye bahlolisise iintshukumisa zabo. (Mateyu 12:24-30; 17:24-27; 22:41-46) Xa iinkokeli zonqulo zambuza enoba wayelinikwe nguThixo kusini na igunya lakhe, uYesu waphendula wathi: “Ubhaptizo lukaYohane lwaluvela ezulwini na okanye lwaluvela ebantwini?” Zikhwankqisiwe nguloo mbuzo, zaqiqa ngelithi: “Ukuba sithi, ‘Lwaluvela ezulwini,’ uya kuthi, ‘Kutheni, ke ngoko, ningazange nimkholelwe?’ Ukuba, ngoko, sithi, ‘Lwaluvela ebantwini,’ soyika isihlwele, kuba bonke babambe ukuthi uYohane ngumprofeti.” Ekugqibeleni, zaphendula zathi: “Asazi.” (Marko 11:27-33; Mateyu 21:23-27) Ngombuzo nje olula, uYesu wazitsho zaphelelwa ngamazwi waza watyhila ubuqhetseba beentliziyo zazo.
13-15. Ibali lommelwane ongumSamariya libubonisa njani ubulumko bukaYesu?
13 Maxa wambi uYesu wayezidibanisa zombini ezi ndlela afake imibuzo exhokonx’ iingcinga kwimizekeliso yakhe. Xa igqwetha elingumYuda labuza uYesu oko kwakufuneka likwenze ukuze lizuze ubomi obungunaphakade, uYesu walathisela ingqalelo yalo kuMthetho kaMoses, oyalela ukuba kuthandwe uThixo kunye nommelwane. Ifuna ukuzingqina ililungisa, le ndoda yabuza: “Ngubani ngokwenene ummelwane wam?” UYesu waphendula ngokubalisa ibali. Indoda ethile yomYuda eyayihamba yodwa yahlaselwa ngabaphangi, bayishiya ife isiqaqa. Kwadlula amaYuda amabini, owokuqala wayengumbingeleli omnye engumLevi. Omabini akazange ayihoye. Kodwa kwafika umSamariya othile. Enovelwano, wawabopha ngobunono amanxeba aloo ndoda waza wayithabatha wayisa kwindawo ekhuselekileyo endlwini yabahambi ukuze inyanyekelwe khona. Ekuqukumbeleni ibali lakhe, uYesu walibuza eli gqwetha wathi: “Ngubani kwaba bathathu obonakala kuwe engummelwane waloo mntu wagaxeleka kubaphangi?” Lanyanzeleka ukuba liphendule lithi: “Ngulowo wamenzela inceba.”—Luka 10:25-37.
14 Eli bali libubonisa njani ubulumko bukaYesu? Ngomhla kaYesu, amaYuda ayelisebenzisa igama elithi “ummelwane” ukubhekisela kuphela kwabo babegcina izithethe zawo—ngokuqinisekileyo kungekhona kumaSamariya. (Yohane 4:9) Ukuba uYesu wayelijikile eli bali laba lelexhoba lomSamariya elincedwa ngumYuda, ngaba oko kwakuya kuyiphelisa intiyo? Ngobulumko uYesu walibalisa eli bali ngendlela yokuba ibe ngumSamariya onyamekela umYuda ngobubele. Kwakhona, phawula umbuzo uYesu awubuzayo ekupheleni kwebali. Wayisusa ingqalelo kwintsingiselo eqhelekileyo yegama elithi “ummelwane.” Eneneni, intsingiselo yombuzo welo gqwetha yayikukuba: “Ngubani endifanele ndibonise uthando lobumelwane kuye?” Kodwa uYesu wabuza wathi: “Ngubani kwaba bathathu obonakala kuwe engummelwane?” UYesu watsalela ingqalelo, kungekhona kwixhoba elenzelwa ububele, kodwa kumSamariya owabonisa ububele. Ummelwane wokwenene uthabatha amanyathelo okuqala okubonisa uthando kwabanye ingakhathaliseki imvelaphi yabo yobuhlanga. Ayikho enye indlela ebhetele uYesu awayenokuyibethelela ngayo le ngongoma.
15 Ngaba oku akusenzi sicace isizathu sokuba abantu bakhwankqiswe ‘yindlela kaYesu yokufundisa’ baze batsaleleke kuye? (Mateyu 7:28, 29) Ngesinye isihlandlo “isihlwele esikhulu” sahlala naye kangangeentsuku ezintathu, singatyi nokutya!—Marko 8:1, 2.
Indlela Awayephila Ngayo
16. Yiyiphi indlela uYesu awabonisa ngayo “ubungqina obusebenzisekayo” bokuba wayelawulwa bubulumko bobuthixo?
16 Indlela yesithathu uYesu awabonisa ngayo ubulumko bukaYehova yindlela awayephila ngayo. Ubulumko buluncedo; bubonakala ngemisebenzi. Umfundi uYakobi wabuza: “Ngubani na osisilumko phakathi kwenu?” Wandula waziphendula ngokwakhe, esithi: “Ihambo yakhe efanelekileyo mayinikele ubungqina obuluncedo boko.” (Yakobi 3:13, The New English Bible) Ihambo kaYesu yanikela “ubungqina obuluncedo” bokuba wayelawulwa bubulumko bobuthixo. Makhe sihlolisise indlela awabonisa ngayo ugwebo lobulumko, kwindlela awayephila ngayo nakwindlela awaqhubana ngayo nabanye.
17. Yintoni ebonisa ukuba uYesu wayephila ubomi obulungelelene ngokugqibeleleyo?
17 Ngaba uye waphawula ukuba abantu abangakwaziyo ukwenza ugwebo lobulumko badla ngokugabadela? Ewe, kufuna ubulumko ukulungelelana. Ekubeni wayenobulumko bobuthixo, uYesu wayelungelelene ngokugqibeleleyo. Ngaphezu kwako konke, wabeka izinto zokomoya kuqala ebomini bakhe. Wayexakeke ngumsebenzi wokuvakalisa iindaba ezilungileyo. Wathi: “Ndiphumele oko.” (Marko 1:38) Ngokuqhelekileyo, izinto eziphathekayo zazingabalulekanga kuye; kubonakala ukuba wayenezinto eziphathekayo ezimbalwa kakhulu. (Mateyu 8:20) Noko ke, wayengazibandezi ulonwabo. NjengoYise, ‘uThixo onoyolo,’ uYesu wayengumntu owonwabileyo, yaye wayebonwabisa nabanye. (1 Timoti 1:11; 6:15) Xa waya kwisidlo somtshato—isiganeko ngokuqhelekileyo esiba nomculo, kuze konwatywe—wayengayelanga kuphelisa olo lonwabo. Yathi yakuphela iwayini, wajika amanzi aba yiwayini, isiselo ‘esenza intliziyo yomntu ibe nemihlali.’ (INdumiso 104:15; Yohane 2:1-11) UYesu wamenywa waza waya kwizidlo ezininzi, yaye ngokufuthi wayezisebenzisela ukufundisa izihlandlo ezinjalo.—Luka 10:38-42; 14:1-6.
18. UYesu walubonisa njani ugwebo olugqibeleleyo ekusebenzisaneni kwakhe nabafundi bakhe?
18 UYesu wayesenza ugwebo olugqibeleleyo xa eqhubana nabanye. Ukuyiqonda kwakhe indlela ababunjwe ngayo abantu kwamenza waziqonda ngokucacileyo iimbono zabafundi bakhe. Wayesazi kakuhle ukuba babengafezekanga. Ukanti, wayeziqonda iimpawu zabo ezintle. Wakubona okuhle okwakunokufezwa ngaba bantu uYehova wabatsalayo. (Yohane 6:44) Phezu kwazo nje iintsilelo zabo, uYesu wayebathemba. Wakubonisa oko kubathemba kwakhe ngokuthi abanike imbopheleleko enzima abafundi bakhe abathanjisiweyo. Wabathuma ukuba bashumayele iindaba ezilungileyo, yaye wayebathemba ukuba banako ukulufeza olo thumo. (Mateyu 28:19, 20) Incwadi yeZenzo inikela ubungqina bokuba bawenza ngokuthembeka umsebenzi awayebayalele ukuba bawenze. (IZenzo 2:41, 42; 4:33; 5:27-32) Ngoko, ngokucacileyo uYesu wabonisa ubulumko ngokubathemba.
19. UYesu wabonisa njani ukuba ‘wayenomoya wobulali yaye ethobekile ngentliziyo’?
19 Njengoko siphawulile kwiSahluko 20, iBhayibhile ihlobanisa ukuthobeka nobulali kunye nobulumko. Kambe ke, nguYehova omisela owona mzekelo ubalaseleyo kule nkalo. Kodwa kuthekani ngoYesu? Kuchukumis’ intliziyo ngokwenene ukubona indlela uYesu awabonisa ngayo ukuthobeka ekusebenzisaneni kwakhe nabafundi bakhe. Njengomntu ofezekileyo, wayephakamile kunabo. Ukanti, akazange abajongele phantsi abafundi bakhe. Akazange afune ukubenza bazive bephantsi okanye bengento yanto. Kunoko, wayenolwazelelelo ngenxa yokusikelwa kwabo umda yaye ezisingatha ngomonde iintsilelo zabo. (Marko 14:34-38; Yohane 16:12) Ngaba akubangel’ imincili ukuphawula ukuba kwanabantwana babekhululeka xa bekunye noYesu? Ngokuqinisekileyo babetsaleleka kuye ngenxa yokuba babephawula ukuba ‘wayenomoya wobulali yaye ethobekile ngentliziyo.’—Mateyu 11:29; Marko 10:13-16.
20. UYesu wakubonisa njani ukuba nengqiqo ekusebenzisaneni nebhinqa loweeNtlanga elalinentombi eyayiphethwe ziidemon?
20 UYesu wabonisa ukuthobeka kobuthixo nangenye indlela ebalulekileyo. Wayebonisa ingqiqo, okanye ukuyekelela, xa kwakufanelekile ukubonisa inceba. Ngokomzekelo, khumbula ngexesha laxa ibhinqa loweeNtlanga lambongoza ukuba aphilise intombi yalo eyayiphethwe kakubi ziidemon. Ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo, uYesu waqala walibonisa ukuba wayengazukulinceda—okokuqala, ngokuthi angaliphenduli; okwesibini, ngokulixelela ngokungqalileyo ukuba wayethunywe, kungekhona kwabeeNtlanga, kodwa kumaYuda; yaye okwesithathu, ngokwenza umzekeliso owathi ngobubele wagxininisa ingongoma efanayo. Noko ke, eli bhinqa lazingisa, libonisa ubungqina bokholo lwalo olugqithiseleyo. Kule meko ikhethekileyo, wasabela njani uYesu? Wenza kanye oko wayethe akazukukwenza. Wayiphilisa intombi yelo bhinqa. (Mateyu 15:21-28) Oku yayikukuthobeka okumangalisayo, akunjalo na? Yaye khumbula ukuba, ukuthobeka kusisiseko sobulumko bokwenene.
21. Kutheni sifanele sizabalazele ukuxelisa ubuntu, intetho, nendlela uYesu enza ngayo izinto?
21 Hayi indlela esinokuba nombulelo ngayo kuba iincwadi zeVangeli zisityhilela amazwi nezenzo zoyena mntu ulumkileyo wakha waphila! Masikhumbule ukuba uYesu wayeyimbonakaliso egqibeleleyo kaYise. Ngokuxelisa ubuntu, intetho, nendlela uYesu enza ngayo izinto, siya kuba sihlakulela ubulumko baphezulu. Kwisahluko esilandelayo, siza kubona indlela esinokubusebenzisa ngayo ubulumko bobuthixo ebomini bethu.
^ isiqe. 1 Ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile, abachweli babeqeshelwa ukwakha izindlu, ukwenza ifanitshala, nezixhobo zokulima. UJustin Martyr, wenkulungwane yesibini yeXesha Eliqhelekileyo, wabhala wathi ngoYesu: “Wayeqhele ukusebenza njengomchweli xa ephakathi kwabantu, esenza amakhuba needyokhwe.”
^ isiqe. 6 Igama lesiGrike eliguqulelwe ngokuthi ‘ukuxhalaba’ lithetha ‘ukuphazamiseka kwengqondo.’ Ngendlela elisetyenziswe ngayo kuMateyu 6:25, libhekisela kwinkxalabo yoloyiko ephazamisa ingqondo, iphelise uvuyo ebomini.
^ isiqe. 7 Uphando lwezenzululwazi lubonisa ukuba ukuxhalaba nokubandezeleka ngokugqithiseleyo kunokusichanaba ekuhlaselweni sisifo sentliziyo nezinye izifo ezininzi ezinokububeka esichengeni ubomi bethu.
IMizekeliso 8:22-31 Ukuchazwa kobulumko obumntwisiweyo kuhambelana njani noko iBhayibhile ikuthethayo ngoNyana kaYehova wamazibulo?
Mateyu 13:10-15 Imizekeliso kaYesu yayinceda njani ukutyhila isimo sengqondo sentliziyo sabo babemphulaphule?
Yohane 1:9-18 Kwakutheni ukuze uYesu akwazi ukutyhila ubulumko bukaThixo?
Yohane 13:2-5, 12-17 UYesu wasinikela njani isifundo sokoqobo, yaye ngaloo ndlela wabafundisa ntoni abapostile bakhe?